स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने १० खानेकुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने १० खानेकुराहरु !!
पोषक तत्व हाम्रो शरीरको विकासका लागि अत्यावश्यक चिज हो । जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्म शरीर सञ्चालनका लागि पोषक तत्वको आवश्यकता पर्छ ।
मानिसहरु प्रायः खानेकुरा खाँदा कुन स्वस्थकर र कुन अस्वस्थकर भन्ने छुट्याउँन सक्दैनन् जसले गर्दा शरीरमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु खानेकुराबाट नै पैदा हुन्छ ।
स्वादका लागि खाने धेरै प्रकारका खानेकुराले शरीरको तौल बढाउने र अन्य विभिन्न प्रकारका समस्याहरु पनि पैदा गर्छ ।
त्यस्ता केही खानेकुराहरुको सेवन गर्नुअघि एकपटक सोच्नैपर्ने हुन्छ । यस्ता खानेकुराले शरीरका अनावश्यक रोगहरु पैदा गराउँछ ।
खानेकुरालाई फ्राइ गरेर, ग्रिल गरेर र ब्रोइलिङ गरेर खानु स्वास्थ्यलाईृ निकै खतरनाक हुन्छ । यसमा एक्रिलामाइड्स, एक्रोलिन, हेटरोसाइक्लिक एमाइन, अक्सिस्टेरोल, पोलिसाइक्लिक एरोम्याटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) र एडभान्स ग्लाइकेशन एण्ड प्रोडक्ट्स आदि तत्वहरु हुन्छ । यसले मुटु रोग बढाउँछ । त्यसैले खानेकुरालाई धेरै तापमा पकाएर खानु हुँदैन ।
पिज्जा संसारकै सबैभन्दा धेरै मन पराइने खानेकुरा हो । यसले शरीरलाई फाइदा गर्दैन । रातोपाटी बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * 36 + = 45